Shina manokana Fahazavana rongony rongony rongony Shinoa 240 miaraka amin'ny orinasa Cork Stopper sy mpamatsy | Hoyer
Tavoahangy voafandrika 240ml mazava be dia be miaraka amin'ny kafe Cork
Avo kalitao, mangarahara, ambany matevina, fitaratra madio.
Bikaingo manintona: endrika lamaody, malaza foana ao an-trano, mora ampiasaina sy fonosana azo antoka.
Afaka mitaky voatavo ihany koa ianao hifanaraka amin'io tavoahangy io. Ny sôkôla dia vita amin'ny fitaovana polimeraly avo, milalao a
anjara toerana ho fomba mahazatra, azo ampiharina sy azo ampiharina mba hisorohana ny alàlan'ny rano mikoriana avy any ivelany, toy ny miakanakana
anaty tavoahangy divay mena. Ny fanesorana ny sarony dia ahafahanao manindrona menaka tena izy ao anaty tavoahangy fitetezana fahitana.
Boky: 240ml / 8.2 oz
Weight: 300g / 0.66 pounds
Haavo: 135mm / 5.3 santimetatra
savaivony: 70mm / 2.7 santimetatra
Color: mazava, sary hoso-doko amin'ny loko hafa dia azo ekena ihany koa
Azonao atao ny manisy azy io amin'ny alàlan'ny filanao manokana: azonao atao ny manova ny fofona ho avy aorian'ny fampiasa azy, na mampiasa fitaovana hafa toa ny hazo volotara, voninkazo, vato seramika miaraka amin'ity andiany ity.
Fanamarihana: tsy ilaina ny kojakoja toy ny vatan-kazo sy ny volotara, raha ilaina, dia afaka mahita azy ireo ao amin'ny tranokalanay izahay na mandefa famotopotorana aminay mivantana. Ny sefo cork dia faneva mahazatra nasionaly, raha mampiasa sefo cork ianao ary mahatsapa fa tena mifikitra, marina izany satria mila famatorana tsara izy mba hisorohana ny leaking. Misaotra betsaka amin'ny fahatakaranao.
Size Boky: 240 ml lanja: 300 g Haavony: 135 mm Haavo: 70 mm Boky: 8,2oz lanja: 0,66 kilao Haavony: 5,3 santimetatra: 2.7 santimetatra
Fanodinana amin'ny paositra Sary hosodoko, fanadiovana, efijery, sary hosodoko, vongan-jaza, fametahana volamena, famafazana volafotsy sns Famoronana efa vita, misy ny famoronana OEM.
Sample a. santionany amin'ny tahiry: QTY: 1–5pcsVidiny: nomena malalakaHafa: manangonaFotoana: 3-5 andro b. santionany namboarina: QTY: araka ny takianao Vidiny: arakaraka ny lamina manokana sy ny vokatraHafa: manangona Fotoana: arakaraka ny endrika manokana
Previous: Tavoahangy tavoahangy fihodinana feno karazana
Manaraka: Tavoahangy tavoahangy 100cm mazava tsara eo amin'ny alàlan'ny alàlan'ny tavoahangy misy marika screw
200ml mafana mivarotra boribory mazava Glassana diffuser ...